Iimpawu ezithile zeentlobo ezintlanu zeentshulube zeenja - Inja Impilo
Iimpawu ezithile zeentlobo ezintlanu zeentshulube zeenja
Iimpawu zeentshulube zenja ziyahluka ngohlobo lwentshulube ehlasela umzimba wenja yakho. Funda ukuba ungayibona njani ukuba inja yakho ineentshulube kwaye ufumane umbono wokuba loluphi uhlobo lweentshulube olubandakanyekayo.
Iimpawu eziqhelekileyo zeNja yeentshulube
Ityala leentshulube zenja linokuvelisa uninzi lweempawu ngokubanzi ezinokuthi zikunike amandla kwi-infestation. Ngokubanzi, xa i-infestation iqhubekile okwethutyana, inja echaphazelekayo iya kubonakala ihla.
Ukuqonda iimpawu zentliziyo yesifo senja
Iimpawu zobushushu benja
Iimpawu eziphambili zeentshulube zenja zibandakanya:
iisayithi zokuthandana zolutsha ezineminyaka eli-17 ubudala
Ukwehla kobunzima (ngaphandle kwesisu esivelayo)
Urhudo olwenzeka manqaphanqapha
Naziphi na okanye zonke ezi mpawu ziveliswa xa inani leentshulube likhula ngokwaneleyo ukuba linokuphazamisa imisebenzi yenja yakho eqhelekileyo. Isilwanyana sakho sihluthwe isondlo, kwaye amalungu akhe abalulekileyo aba sesichengeni njengoko uhlaselo luhlasela ngokungalawuleki.
Iimpawu eziveliswa ziintshulube ezithile
Ngoku lixesha lokuba uthethe malunga neempawu ezithile zeentshulube zenja ezinxulumene nezona ntshulube zixhaphakileyo inja yakho ekunokwenzeka ukuba ihlangane nayo. Khumbula, inja ezele sisifo isenokubonisa nakuphi na ukudityaniswa kweempawu ezichazwe apha ngasentla ukongeza kwiimpawu ezithile eziveliswe ziintshulube ezichaphazelekayo.
Ucoceka njani imigangatho yethayile yodongwe
Iintshulube ze tapeworm yenye yeentshulube ekulula ukuzichonga ngamehlo, kwaye zidluliselwa kwinja ngokubanzingeentakumba. Kwinkqubo yenja yakho, ezi ntshulube zinde kwaye zithe tyaba kwaye zinamacandelo amaninzi. Ngamaxesha athile iimpethu zichithwa kwisitulo senja njengoko la macandelo eqhawuka. Ungazibona njengeerayisi ezinjengeenkozo kwisitulo senja yakho, kodwa ungabafumana benamathele kuboya obujikeleze umngxuma wenja yakho. La macandelo aphilayo anokufumaneka nakwimigangatho, ifanitshala ngakumbi kwimibhede yenja yakho.
Iimpawu ezithile zentshulube ye tapeworm zibandakanya:
Iintshulube ezingqukuva zichongiwe ngenkangeleko yazo efana nespaghetti, kwaye ziyancamathela kulwakhiwo. Oku kuvumela ukuba bagqithise ngokulula phakathi kwezinja kwanabantu. Ziyabonakala ngokulula kwisitulo senja okanye ukugabha.
Ukugcwala kolu hlobo kuvelisa zonke iimpawu eziqhelekileyo ezidweliswe ekuqaleni kweli nqaku. Ukongeza, ukuthintela ixesha elide kunokubangela isithintelo samathumbu, ke jonga iimpawu zoxinzelelo, ngakumbiukungakwazi ukupasa ilindle.
I-whipworms ayibonakali ngeliso lenyama, kodwa iimpawu ezizibangela zibonakala kakhulu.
Ukwehla kobunzima obukhulu
I-Hookworms ifumana igama labo kwinto yokuba banamathele kwiindonga zamathumbu enja ngemilomo yabo.
uthini emntwini ofayo
Iimpawu ze-infestation zibandakanya:
Ukoma kwesikhumba kunye / okanye ukucaphuka
Izitulo zegazi / ukuphuma kwegazi
Iintlungu zemiphunga zinokubonakala ngathi zikudidi olwahlukileyo kwiintshulube ezichazwe ngaphambili kuba zihlala kwinkqubo yokuphefumla kwenja endaweni yokugaya. Nangona kunjalo, ezi zisengumbungu, kwaye zivelisa iimpawu ezithile.
uyithumela njani ivoyisimeyili ungakhange ubize
Ukugula ngokubanzi / ubuthathaka
Unyango lweentshulube zeNja
Xa kukrokreleka ukosuleleka kwentshulube, kubaluleke kakhulu ukuba uchonge iintlobo ezichaphazelekayo ukuze amayeza achanekileyo asetyenziselwe ukubulala iintshulube kunye nokuphelisa iimpawu. Izabhokhwe, iiteyiphu, amagwegwe kunye neentshulube ezingqukuva zonke zichongwa ngokuvavanya iisampulu zelindle phantsi kwemicroscope kubukho bamacandelo eentshulube kunye / okanye amaqanda. Iintshulube eziqhelekileyo zibandakanya, kodwa azikhawulelwanga, ivermectin, pyrantel pamoate, praziquantel kunye ne-milbemycin oxime. Soloko uvumela ugqirha wezilwanyana ukuba athathe isigqibo malunga nokuba leliphi iyeza ekufuneka lisetyenzisiwe, kunye nedosi efanelekileyo kunye neshedyuli yokulawula. Uninzi lweentshulube zifuna iidosi ezininzi ukuze zisuse ngokufanelekileyo inani leentshulube.
Iintsholongwane zentliziyo ngumceli mngeni omkhulu. Uthintelo og ezi ntshulube zisebenza ngakumbi kwaye ngokuqinisekileyo zikhuselekile kunonyango lokubasusa. Izinja ezisindayo kunyango zisenokonzakala kwintliziyo. Unyango lubandakanya uthotho lweenaliti ze-immiticide kunye nokulaliswa esibhedlele kuyafuneka.
Ukuthenga Cell Phones Iinkampani Ze-Inshurensi Uhambo Ship Uqeshiso Iinkampani Zemortgage C Spa Vacation Destinations
uyenza njani indoda yeepisces ikufune
ivelaphi idessert yokuqala
Ngaba ijusi ye-cranberry inevithamini c
Indlela yokusebenzisa i-sod cutter kumhlaba othe tyaba
indlela yokuphendula kwi-imeyile yesicelo sodliwanondlebe